5 Obodo Obodo kacha mma na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Obodo Obodo kacha mma na Europe
Europelọ ndị Europe na maa mma n'okporo ámá na ebe abụrụla ebe akụkọ dị ịtụnanya ruo ọtụtụ puku afọ. Ruo taa Yurop bụ ebe oriri na-abanye na ụwa. Ọ bụ ihe mechiri emechi maka ndị njem si n'akụkụ ụwa niile okokporo na azu bachelorette. Ya mere, anyị ahọrọla nke ọma 5 obodo otu na Europe maka ihe ngosi nka nke ezumike na anụ ọhịa.
Berlin ka Amsterdam, Mbibi mkpọchi ụlọ ịgba abalị kacha ibu na Europe, site ụgbọ okporo ígwè njem ma ọ bụ klọb ịgba, kechie eriri oche gị maka njem ọhịa ahụ.
Njem ụgbọ okporo ígwè bụ Mostzọ Enyi Enyi na-enwekarị njem iji gaa Europe. Isiokwu a na-e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, The Weebụsaịtị ndị ụgbọ oloko dị ọnụ ala n'ụwa.
1. Nnọọ na Berlin, Germany
Otu n'ime obodo kachasị mma na Europe, Berlin bu obodo ndi mepere emepe, egwú, na DJ kacha mma n'ụwa. Akụkọ ihe mere eme ya na ọdịbendị ya emetụtala ọdịiche ya na usoro nnabata ọhụụ, nke pụtara na ihe ọ bụla na-aga. Ya mere, Berlin bu obodo ndi mmadu ndi mmadu kachasi nma na Europe.
Ebe a na-eme egwuregwu na ebe a na-eme egwuregwu Berlin na-amalite mgbe chi jisịrị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe ụdị ndụ abalị nke Berlin dịka onye Berliner, kpoo akpụkpọ ụkwụ dị mma, Ekike ị ga-eyi wee bịa na Fraịde. Jiri otu n'ime ọtụtụ mmanya na Berlin gaa mpaghara mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
E zoro bọọlụ kachasị mma na Berlin na mpaghara ọrụ Berlin yana n'okpuru ụzọ ụgbọ oloko. Kwadebe onwe gị maka oriri na-agaghị akwụsị akwụsị, ma ọ bụ na-akwụsị naanị mgbe nwoke ikpeazụ guzo. Clublọ ọgbakọ Berliners na-amalite n'abalị dị ka 1 m na Satọde ruo Sunday n’ime abalị. Nke a na-etinye Berlin na obodo kachasị mma na nke oriri kachasị mma na Europe na ndị njem na ndị ọkpọ na-eme njem si n'akụkụ ụwa niile.
Gịnị bụ Kachasị clọ oriri na ọ Nightụ Nightụ abalị na Berlin?
Ọ bụrụ na ị dị elu maka 48h nke oriri na ị haveụ oge maka naanị otu klọb, mgbe ahụ ijide n'aka na ị ga-eme oriri na Berghain. Teknụzụ kachasị mma na ụda ụlọ ga-eme mkpatụ ebe a na-agba egwu ngwụsị izu niile.
2. Nnọọ na Budapest, Hungary
N'ehihie na mgbe anyanwụ dasịrị, Budapest bụ ihe dị ịtụnanya nke nwere ọmarịcha ihe owuwu na saịtị ndị mara mma. Ka ị na-awagharị n'okporo ámá, anya gị nwere ike na-enweghị ike na-esochi mgbe ihe ndị kasị mara akara ala na Europe. ma, n'abalị ị ga-achọpụta ụwa ọzọ, ụwa nke ụlọ ndị dara ada na-agagharị na ogwe ndị kachasị dị na Europe, na ọnọdụ a pụrụ iche na-etinye Budapest na anyị 5 obodo kacha mma otu na Europe.
Mgbe ọchịchịrị gachara, N’ebe ozo, ebe enweghi ụkpụrụ ma ọ bụ iwu ụlọ, Ihe aghaghi ịgha ọhịa.
Gịnị Bụ Kachasị Nightlọ oriri na ọ Nightụ Inụ Na Budapest?
Szimpla Kert bụ akara ngosi mbibi Budapest nke dị na district 7 na ngalaba ụlọ elu ụlọ ya dị elu na nke ịchọrọ nleta maka ahụmịhe na-agbamasị anya nke abalị oriri nke Budapest.
3. Nnọkọ na Prague, Czech Republic
Prague bụ otu n’ime obodo mara mma na Europe. N'ehihie, ọ ga - adị gị ka ị laghachitere na mbadamba ụlọ, ndị isi, na knight akụkọ, mana n’abali ị na-eme njem ịgagharị abalị, ebe ihe mgbochi na-ahapụ n’azụ ụzọ.
Obodo jupụtara na ubi ahịhịa n'akụkụ osimiri, pubs, na Ogwe nwere echiche ndị dị ịtụnanya banyere obodo ahụ na nke a mara ụlọ ọgbakọ ama ama.
Gịnị Bụ Kachasị Nightlọ oriri na ọ Nightụ Inụ Na Prague?
Prague bụ ụlọ na klọb buru ibu na Europe, akụkọ ahụ Karlovy Lazne Club. Ya mere, ma ọ bụrụ na gị na ndị enyi gị na-eme atụmatụ ịga Prague gaa Prague iji nyochaa obodo kacha mma na Europe, mgbe ahụ nke a bụ ihe ga - akwụsị njem gị. Mara na ozugbo ị banyere n'ọnụ ụzọ ụlọ ọgbakọ, ị nwere ike wepu onye kpamkpam kpamkpam Ihe ọ bụla mere na Prague, nọrọ na Prague.
4. Nnọọ na Amsterdam, Mba netherland
Onye ama ama maka ọwa mmiri ndị mara mma yana kọfị ụlọ ahịa, Amsterdam bụ onye Europe ama ama njem ezumike. Ọ nwere ụdị nke ọma, n'agbanyeghị obodo a ma ama na-acha ọbara ọbara na mpaghara na ụlọ ahịa kọfị.
Ọ bụ ezie na Dutch na-ahọrọ obere nnọkọ dị ala, ọ bụrụ na ị jụọ ndị njem nlegharị anya si n'akụkụ ụwa niile, ha ga ekwu na Amsterdam nwere uzo ozo. In comparison to the other cities in our best party cities in Europe, na Amsterdam, sounds ga - ahụ ụda ọhụụ n'ọtụtụ klọb, mana ọzọkwa ndụ music. Ihe ngosi a na-ahụ anya na-ewu ewu na Amsterdam.
Gịnị Bụ Kachasị Nightlọ oriri na ọ Nightụ Inụ Na Amsterdam?
Naanị ole na ole n'ime ụlọ ịgba egwu kachasị mma bụ Melkweg na Bimhuis, na ezigbo ụlọ ịgba abalị bụ De Marktkantine na ndo.
5. Egwuregwu na Vienna, Austria
Obodo anyị maara maka opera na-emebeghị ọhụụ na ndụ ọdịnala nwere ọmarịcha na egwu abalị. Ndi ozo n’abali ndi ozo n’obodo ndi agbata obi, ebe a na-ahụ maka abalị na Vienna bụ ezigbo mmadụ karịa nke ahụ. Ọmụmaatụ, ego mbata na Vienna dị obere yana amụma izu ike ezumike.
na Vienna, Inwere ike ịchọta klọb teknụzụ, kamakwa n'okpuru ala na ụdị acid na klọb ụfọdụ.
Gịnị Bụ Kachasị Nightlọ oriri na ọ Nightụ Inụ Na Vienna?
Maka ndị otu kachasị mma na teknụzụ gaa Das Werk na Grelle Forelle. Ọ bụrụ na ịchọrọ klọb na-achọ mkpọtụ, gakwuru ndị Gurtel, Uzo di n’etiti n’etiti obodo. Ebe ahụ ka ị ga-ahụ ọtụtụ ebe obibi na klọb ndị ejikọtara ọnụ. Gbalia lelee Venster99.
Elektro Gonner bụ ezigbo ihe atụ nke ndụ abalị nke Vienna. Emi odude ke ufọkurua ikan̄, ọ bụkwa ohere maka nrụnye vidiyo na egwu egwu. Ogwe aka ekpe dị n'elu Sofitel Vienna Stephansdom nwere ọdịda anyanwụ dara na echiche obodo.
Ihe omuma ndi ozo banyere ndi ozo na Europe
Kedu Oge Kacha Mma Iji Nwee Ndụ Night Na Europe?
Oge opupu ihe ubi yana oge mgbụsị akwụkwọ bụ oge kachasị mma maka njem na ịchọpụta obodo kachasị mma na Europe.
Kedu ihe bụ ọnụego ọnụego maka ụgwọ nbanye na oriri abalị na Europe?
Ego mbata dịgasị iche iche site na mba ruo mba. Imirikiti obodo Europe dị ọnụ, ọmụmaatụ, Prague na Budapest, 5-20 ọnụ ụzọ euro na mmanya na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, ebe ụfọdụ na-adị ọnụ karịa, mana ihe kachasị mkpa, bia n’abia, yabụ ị gaghị enwe ogologo oge kwụ n'ahịrị.
Kedu Obodo nwere abalị kacha mma na Europe maka Afọ Ọhụrụ na Ekeresimesi?
Obodo kachasị mma maka mmemme ekeresimesi na nke afọ ọhụrụ bụ Berlin ọ bụrụ na ị na-eme njem a uko ego. Amsterdam na Prague bụ ndị mara mma n'oge oyi, mana ọnụọgụ ọnụ.
ikwubi, Europe nwere ihe ị ga-enye maka ụtọ ọ bụla, ochicho, larịị ajọ omume, na mmefu ego. Ugwu anyi 5 obodo otu na-enye ihe kachasị mma n'ụwa niile. Nwere ike ịmalite jiri nwayọ na ịkụ ọkpọ ma ọ bụ klọb egwu egwu dị ndụ wee gaa n'ihu n'okporo ụlọ ịgba egwu kachasị na Europe, ha nile n'otu abali. Ka ihu ya niile, obodo obula di nfe via ụgbọ okporo njem, yabụ ọ bụrụ na ọ bụ nrọ gị ịchọrọ ịme mmemme izu ụka wee leta niile 5, emesia Europe echere.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta tiketi ụgbọ ala kachasị ọnụ na nke ọ bụla n'ime obodo ndị ọzọ mara mma na ndepụta anyị.
You chọrọ itinye mgbagha blọọgụ anyị “5 Obodo Kachasị Mma Na Europe” na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-party-cities-europe/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / fr na / de ma ọ bụ / es na ndị ọzọ asụsụ.